ယခုဘဏ္ဍာနှစ်ရှစ်လအတွင်း ဆန်တန်ချိန် နှစ်သန်းကျော် ပြည်ပတင်ပို့နိုင်ခဲ့၊ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အတွင် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ- ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်ရှစ်လအတွင်း ဆန်တန် ချိန် ၂ ဒသမ ၂ သန်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း အများဆုံးဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် ရရှိရန် ဆက်လက်ကြိုးစားပါက ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တို့ကို မီလာမည် ဟု ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေ က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်၌ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက် က ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေ ဦးဆောင် သည့် မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏(၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေက ”ဆန်တင်ပို့မှုကိုကြည့် ရင် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလမှ နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ရှစ် လအတွင်း ဆန်တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၂ သန်း တင်ပို့နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်တစ်နှစ်စာချင်း ပို့ထားတဲ့ဆန် တန်ချိန်တွေထက် ရှစ်လစာတင်ပို့မှု က လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်းမှာ အများဆုံး အနေအထားဖြစ်ပါ တယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွေမှာ မြန် မာ့ဆန်ကို ဆက်ကြိုးစားသွားရင်ပိုမိုပြီးရှေ့မှာ ရောက်နေတဲ့ ထိုင်း တို့၊ ဗီယက်နမ်တို့ကို အမီလိုက်ပြီး တင်ပို့နိုင်မယ့် အနေအထားဖြစ် ပါတယ်”ဟု ယင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
အစိုးရသစ်သက်တမ်းကာလ အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝင်ရောက်ရာတွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍသည် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည် ကာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍသည် ၂၄ရာ ခိုင်နှုန်းဖြင့် ဒုတိယနေရာမှ ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယသမ္မတ (၁)ဦးမြင့်ဆွေက ”ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအနေနဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကို ရောက်လာ တာဟာ ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ သွင်းကုန်အစားထိုးလုပ်ငန်း များကို ပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက် တွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဦးစားပေးမယ့် ကဏ္ဍတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အသေးစားနဲ့ အလတ်စားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်း (SME) များပါဝင်မှုဟာ နိုင်ငံမှာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ မောင်းနှင်အားတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ SME ဟာ ကြိုးစားအကောင် အထည်ဖော်နိုင်တာနဲ့အမျှ စီးပွား ရေးအများကြီးတိုးတက်လာမယ့် အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ အောင် မြင်လာတာနဲ့အမျှ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ စီးပွားရေး အများကြီးတိုးတက်လာ နိုင်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်းတွေလည်း အများကြီးရလာမယ်။ အလုပ်လက်မဲ့လည်း လျော့လာမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာချည်းသွား ပြီး အနှိမ့်ချခံလုပ်နေရတဲ့လုပ်သား တွေကလည်း ပြည်တွင်းမှာ လာ ရောက်လုပ်ကိုင်လာကြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ စာရင်းကိန်းဂဏန်းများ အရ ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ ဒသမ ၆ ဘီလီ ယံကျော်ရရှိထားပြီး ယခင်ဘဏ္ဍာ နှစ်ကာလတူထက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ပိုမို ကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ကုန် သွယ်မှုသည် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ ခန့် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကို နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပါက ကန့်ကွက်ရန်မရှိဘဲ ပူးပေါင်းဆော?
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြောင်းစိုက်ခင်းများနှင့် အခြားစိုက်ခင်းများတွင် ငမြော??